Nezvedu - Nanchang Hot Fashoni Co, Ltd.
Hot Fashoni Co, Ltd. yakagadzwa mugore ra2003 ibasa rakasiyana-siyana rinosanganisa dhizaini, kuvandudza uye kugadzirwa kuita yekushambadzira uye e-commerce kushanda. Iyo kambani iri muNanchang Guta, Jiangxi Province, China ine hombe webhu yekufambisa zvinongedzo. Iyo ine 8250 mativi emamita eazvino ekugadzira base uye vashandi mazana matatu.
Hot Fashoni inozivikanwa kwazvo mumunda wehembe mbatya muChina. Uye ikozvino zvigadzirwa zvaro zvakabudirira kumisikidza musika kuUnited States of America, United Kingdom, Japan, Brazil neEuropean Union.
Yayo chigadzirwa mhando inovhara T shati, polos, akapfeka masheti, bhasiketi uye nhabvu / nhabvu majezi. Parizvino, Hot Fashoni ine 60 vagoveri pasi rese uye zvigadzirwa zvayo zvinotengeswa pamapuratifomu epamhepo mukati nekunze.
Hot Fashoni inogona kupa OEM neODM marogo uye mapatani munzira dzakasiyana senge kupisa kupisa, kudhinda kwechidzitiro, kudhinda sublimation, embroidery, 3D kudhinda uye zvimwe.
Hot Fashoni ine yakazara Dhizaini uye Dhizaini uye Dhinda Dhipatimendi inokwanisa kuwana sampling mukati memazuva mashanu uye kugadzirwa kwemazhinji mukati memazuva gumi nemashanu.
Hot Fashoni ine yakatsaurirwa mushure-yekutengesa timu yekutarisira vatengi vayo.
Fashoni inopisa yakunda kuvimba kwevatengi vayo muEurope, North America, South America, Africa neAsia yehunhu hwayo, chimiro uye hunyanzvi hwekugadzira.
Pano paHot Fashion, isu, timu inofarira, tinofarira zvatinoita. Isu tinoshuva uye takazvipira kuisa tsoka yedu munguva ino yekutenga pamhepo uye kuwana yakatowanda misika yekuvhara pasi rese. Isu tinoziva zvakare mushe nzira yekuzadzisa ichi chinangwa ichave iri vatengi uye isu tinozviita izvi nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye nebasa rakakura revatengi. Isu tinogamuchira tekinoroji yazvino, kudzidziswa kwevashandi uye misangano yenguva dzose nevamwe vatinoshanda navo muindasitiri saka isu tinogara tiri pamberi pamberi pehunyanzvi uye tinochengetedza pfungwa yedu yechitaera.